Akụkọ - asingbawanye ahịa ahịa maka ihe nkiri BOPET optical.
Medical Blue Na Green Mmetụta Film
Medical kpọrọ nkụ Nkiri
Medical kpọrọ nkụ Printer
Na-abụghị Solu backsheet
Fluoro (Pvdf) Akwụkwọ mpịakọta anyanwụ
Fluoro (Pdf) Akwụkwọ mpịakọta anyanwụ
Chemicals Na-ekpo Ọgwụ
Increbawanye ahịa ahịa na ngwa anya BOPET.
Ahịa nke ihe nkiri Optical PET nwere nnukwu ikike: Na mmepe ngwa ngwa nke FPD, teknụzụ nchekwa ike. na ụlọ ọrụ PV, ihe nkiri PET na-egosipụta ike dị elu. maka LCD, ọ dịkarịa ala 7-8pcs nke ihe nkiri PET na-ahụ anya ga-arụ ọrụ (ihe nkiri 2 na-ekesa ihe nkiri, ihe nkiri 1 prisim, ihe nkiri 2 retardation, 1 ihe nkiri na-enwu ọkụ, 1 na-echebe nchebe) Ihe ngosi dijitalụ na FPD abụrụla usoro mmepe ụwa. dị ka isi ihe maka LCD, Optical PET film nwere nnukwu ahịa nwere.
Ngwa anya PET ihe nkiri ahịa analysis
Ekwuru na ọ bụ naanị ụlọ ọrụ ole na ole nwere ike ịmepụta PET fil maka ngwa LCD n'ihi oke chọrọ na ogo na teknụzụ. Mitsbishi na Toray ewerela ihe dị ka pasenti 90% maka ihe nkiri PET maka ngwa polarizer. ọzọ 4 Japanese ụlọ ọrụ na-monopolizing ngwa anya PET ịse maka BLU. E wezụga nke ahụ, ụlọ ọrụ Korea na-agbasi mbọ ike ịbanye n'ahịa a.
Mitsubishi turu ọnụ na imepụta ihe nkiri PET dị ihe dị ka puku tọn 220 puku kwa afọ, n'etiti nke Santo na Japan na-ewe 80 puku tọn, 55 puku tọn site na Germany, US, 65 puku tọn, Indonisia 20 puku tọn. Mitsubishi na-ewere 27% ahịa zuru ụwa ọnụ nke ngwa anya. PET ihe nkiri, ọ bụkwa naanị onye na-eme ihe nkiri na Japan na-eme ihe nkiri PET. Iji nweta ihe na-arịwanye elu maka ihe nkiri PET, Mitsubishi na-ezube ịgbakwunye usoro 40 puku tọn nke ga-eme Mitsubishi nnukwu ihe nkiri PET. ụwa nwere ego a na-atụ anya ya na RMB 20 ijeri (USD 233 Mil.) iji mee ka ọnọdụ ya sie ike dịka onye na-eme ihe nkiri PET kachasị elu.
Ngwa anya PET ihe nkiri ahịa analysis na China
Na mmepe nke LCD TV gbakwasara ngwa oru ulo, Eshia ejirila nke nta nke nta bụrụ ihe ọhụụ ọ bụ ezie na ọ bụ isi teknụzụ. mepụtara na US. Ugbu a Japan, South Korea, Chinese Mainland, China Taiwan bụ mba na-anọchite anya ọkwa ụwa. China jiri nwayọọ nwayọọ na-ejide ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ọ ga - amalite ngwa ngwa.
Post oge: Jan-09-2021